छाउपडी गोठ भत्काउन थालियो, छाउपडी प्रथाको अन्त्य होला त ? - samayapost.com
छाउपडी गोठ भत्काउन थालियो, छाउपडी प्रथाको अन्त्य होला त ?
समयपोष्ट २०७४ पुष ४ गते ६:१९
कञ्चनपुरस्थित वेदकोट नगरपालिकामा छाउपडी गोठ भत्काउने अभियान शुरु गरिएको छ ।
‘छाउपडी कुरीतिको रुपमा रहेको छ, कानूनले पनि यसलाई अवैध भनेको छ’, उनले भनिन्, ‘महिला अझै पनि छाउपडी गोठमा बसेकाले भत्काएका हौँ ।’
गोठ भत्काउने अभियानमा वडाध्यक्षहरुले पनि साथ दिएका छन् । वडा नं १ का अध्यक्ष हरि गिरी र २ का अध्यक्ष नरेशबहादुर सिंहले गोठ भत्काउन स्थानीय बासिन्दासँगै बस्तीमा पुगेर सहयोग गरेका हुन् ।
वडा नं १ का अध्यक्ष गिरीले छाउपडी गोठमा बस्दा महिला असुरक्षित हुने भएकाले भत्काउनमा सहयोग गरिएको बताए । ‘गोठ घरबाट टाढा हुुन्छ, त्यसरी बस्दा बलात्कारमा परेका केस आएका छन्, चोरी डकैतीको डर हुन्छ’, उनले भने, ‘महिलालाई सुरक्षित बनाउन गोठ नभत्काई हुँदैन ।’
वडा नं १ मा १२ र २ मा ३२ छाउपडी गोठ भत्काइएका छन् । गोठ भत्काउनुअघि संघसंस्थाले महिलासित जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेको थिए । महिलालाई कार्यक्रममा सहभागी गराएपछि गोठ भत्काउन थालिएको केन्द्रका अध्यक्ष बोहराले बताइन् ।
सुदूरपश्चिममा रजस्वला भएकाहरु पाँच दिनसम्म घरभन्दा बाहिर बनाइएको गोठमा बस्छन् । त्यहीं गोठलाई छाउपडी गोठ भन्ने गरिएको छ । कृष्णपुर, वेदकोट र झलारीमा सबैभन्दा बढी छाउपडी गोठ छन् ।